विप्लवलाई महासचिव दिने कुरा हल्ला मात्रै हो : धर्मेन्द्र बास्तोला - मध्य पहाड
Posted on १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १८:४३ - १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १८:४३ by Madhya Pahad
विप्लव नेता धर्मेन्द्र बास्तोला ।
काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएलगत्तै पुनः पक्राउ परेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै प्रहरीले उनलाई सर्वोच्च अदालतकै गेटबाट पुनः पक्राउ गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले पुनः पक्राउ गरिएमा विपक्षीलाई नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा विपक्षीलाई दिनू भन्दै आदेश जारी गरेको थियो । तर, प्रहरीले भने सर्वोच्चको गेटबाहिर निस्केलगतै बास्तोलालाई पक्राउ गरेको छ ।
राजनीतिक निकास र स्थिरता हाम्रो पनि चाहना हो
सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच वार्ताका प्रयास जारी छन् । तर, ती प्रयासले सार्थकता पाउन भने सकेको छैन् । यसै सन्दर्भमा नेकपाका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलासँग सहकर्मी प्रशान्त वलीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा नै गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
तपाईहरू वार्ताका लागि तयार हो ?
हामी वार्ताको पक्षमा छौं । अहिले पनि वार्ता भइरहेको छ । सरकार राजनीतिक समस्याबारे कति गम्भीर छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो पार्टी वार्ताद्वारा राजनीतिक समाधान गर्न कटिबद्ध छ । हामीले छलफल गरेका छौं बहस गरेका छौं । सरकारले गम्भीर रूपमा बार्ता गर्ने हो भने हामी हाम्रा एजेन्डा राख्न तयार छौं । राजनीतिक निकास र स्थिरता हाम्रो पनि चाहना हो ।
केके हुन् एजेन्डा ?
सरकार वार्ताका लागि ‘सिन्सियरली’ आयो भने हामी पनि तयारी अवस्थामा नै छौं । सरकारले न्यूनतम रूपमा कम्तीमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुप¥यो । बन्दीको रिहाइ गर्नुप¥यो । त्यसपछि वार्ता गर्नुप¥यो । हामीले कसरी समाधान खोजिराखेका छौं कम्तीमा सरकारले त सुनिदिनुप¥यो नि । सरकारका कुरा त हामीले बुझिराखेका छौं । हामी सरकारसँग छलफल वार्ता गरेर हाम्रा एजेन्डा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौं । र, देशलाई निकास दिन पनि तयार छौं ।
तपाईंको अध्यक्ष विप्लवलाई महासचिवको प्रस्ताव पनि आएको छ होइन ?
अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै पनि प्रस्ताव आएको छैन । अहिले जुन बजारमा हल्ला आएको छ विप्लवलाई महासचिव दिएर सहमति गर्ने भन्ने । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । बरु आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको भने यथार्थता हो । हामी वार्तामार्फत राजनीतिक समस्याको हल होस् भन्ने पक्षमा छौं । सरकार समस्याको निकास निकाल्न गम्भीर भएको देखिएन ।
तपाईंलाई अदालतले यसअघि नै छाड्ने आदेश दिएको थियो, अब के होला ?
यो अलिक राजनीतिक पूर्वाग्रह र कानुन मिच्ने काम भएको छ । सरकारले यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो । तर, अदालतको आदेशविपरीत पक्राउ गर्नु राम्रो विषय भएन । सर्वोच्चको आदेशले गैरकानुनी तरिकाले गिरफ्तार गरियो भने अदालतको मानहानी हुनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । तर, आदेशविपरीत पक्रनु त कानुनविपरीत भएन र ? साभारःराधानीबाट
This entry was posted in Breaking, अन्तर्वार्ता, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ५, मुख्य समाचार, वाग्मती प्रदेश, समाचार, समाज, सुदूरपश्चिम प्रदेश and tagged by Madhya Pahad. Bookmark the permalink.
← सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीबाट भागिन्नः सभापति देउवा
संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटायो →